Tovolahy nisandoka ho mpiadina tao Antsirabe - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Tovolahy nisandoka ho mpiadina tao Antsirabe
Sarona tao amin’ny Lycée André Resampa, Antsirabe ny tovolahy iray nisandoka ho mpiadina ny fanadinana Bakalorea, omaly maraina. Tonga tao amin’ny efitranom-panadinana toy ireo mpiadina rehetra izy. Nandray laza adina ary efa nahafeno pejy iray tamin’ny taratasim-panadinana. Vao nanomboka nanao fanaraha-maso ireo mpiadina isaky ny efitrano ny tompon’andraikitra dia mody niera nivoaka ity tovolahy ity, ka tsy niverina intsony.
« Rehefa nojerena ny taratasy fiantsoana teo amin’ny toerany, dia anaram-behivavy no tao. Ny antontan-taratasy rehetra momba azy tao amin’ilay fiantsona koa nanamafy fa tovovavy no tokony niatrika ny fanadinana. Nisy taratasy feno hala-tahaka koa ny entan’ity tovolahy ity », hoy ny tompon’andraikitra tao amin’ny foibem-panadinana.
Fantatra ny laharan’ny findain’ilay vehivavy, taorian’ny fikarohana izay tokony hiatrika fanadinana. Nantsoin’ny tompon’andraikitra izy, ka raha vao nilaza taminy ny tokony hankanesany any amin’ity tobim-panadinana ity ilay niantso azy dia notapahany ny antso.
Nisy mpiadina iray koa narary tao anaty efitrano fanadinana, tao amin’ny Ceg Soamalaza Antsirabe, ka tsy afaka nanohy ny fanadinana, omaly tolakandro.
Mahatratra 7782 ny isan’ireo mpiadina ity fanadinana ity, ao amin’ny faritra Vakinankaratra. Mizara amina tobim-panadinana 10 izy ireo. Ny sokajy A2 no maro an’isa indrindra : 5087.
Ny sokajy C miisa 454 kosa no ambany indrindra.
Antalaha – Efa fantapantatra ny tompon’ ireo andramena tratra Mihamazava ny lalana mizotra mankany amin’ny tompon’ireo andramena miisa 2 294, tratra tao Ranotsara, tany amin’ny moron-dranomasina, tao Antalaha, ny zoma lasa teo. Voalaza fa mpandraharaha ao an-toerana ihany izy io. “Isan’ireo mpandraharaha nanao fanambarana tamin’ireny fotoana nangatahana ny fanaovana fanambaràna ny tahirina andramena eo an-tanany ireny ireo mpandraharaha ireo. Herinandro vitsivitsy izay, raha ny vaovao azonay, no nanao fangatahana ny hamindrana toerana ireo hazo ireo izy ireo. Fangatahana izay nokasain’izy ireo halefa eny anivon’ ny fiadidiana ny Praiminisitra, eny
Fanafihan-jiolahy tao Betroka – Fifampitifirana adiny telo nahafatesana dahalo dimy sy olon-tsotra telo Naharitra adiny telo ny fifampitifirana tamin’ny dahalo sy ny zandary tany Befotaka ny alarobia 8 mey teo. Nanomboka tamin’ny 2 ora tolakandro ka hatramin’ny 5 ora hariva dia tsy nahenoana afa-tsy feom-basy tao amin’ny tanàna iray antsoina hoe Ambiatoka. Dahalo dimy sy olona telo avy amin’ny fokonolona no maty tamin’izany. Raha ny fantatra dia dahalo avy nanafika tokan­trano telo tao Betaingisy ao amin’ny fokontany Anakoty, kaominina ambanivohitr’i Beharena ireo dahalo ireo, ka omby an-jatony no lasan’ izy ireo tamin’izany. « Dahalo an-jatony nirongo basim-borona 60 mahery teo ho eo sy fitaovam-piadiana hafa no nanafika », hoy ny tatitra azo avy eo anivon’ ny zandary any an-toerana. « Raha vao nahazo fampandrenesana mikasika io fanafihana io ny zandary tao Befotaka dia nandefa zan­dary nanampy ny foko­no­lona hiambina ny kizo tao Ambiatoka, toerana nitrangan’ny fifampitifirana. Tokony ho tamin’ny 2 ora hariva ireo dahalo no nandalo teo amin’io kizo io, ka raha vao nahita ireo mpiam­bina izy ireo dia nanao tifitra variraraka. Tamin’izany no nahafaty ny telo tamin’ireo fokonolona. Namaly koa tetsy ankilan’izay ny zandary ka lavo ny dimy tamin’ireo dahalo », hoy ihany ny tatitra avy tany an-toerana.
Asan-dahalo – Polisy iray sy olon-tsotra voatifitra, omby 30 najifa Polisy iray sy olon-tsotra iray mpanara-dia no naratra mafy voatifitry ny dahalo, tao Ambongabe any amin’ny Kaominina Tsiroanomandidy, ny 8 mey teo tokony ho tamin’ny 10 ora alina. Dahalo maromaro izy ireo no niaraka nangalatra omby 30 izay fananana kaomisera miso­tro ronono. « Nirongo basim-borona izy ireo sady nitondra fitaovam-piadiana hafa », hoy ny tatitra avy amin’ny zandarimaria. « Raha vao nahita ireo mpanara-dia ireo dahalo dia nitifitra avy hatrany ka nahavoa ny iray tamin’ireo fokonolona. Ilay polisy kosa indray dia nanao sakana teo amin’ny arabe ary sendra ireo dahalo nandalo teo ka notifirin’izy ireo ihany koa », hoy ihany ny zandary avy ao Tsiroanomandidy. « Nisy jiro nirehitra teo amin’ny toerana nisy ireo polisy ireo ka avy hatrany dia hitan’ireo dahalo. Miala 20 metatra amin’ny toerana itobiany no nitrangan’io voina io », araka ny voalaza hatrany. Rehefa nahazo antso ny zandary tany Tsiroanomandidy dia nandefa zandary roa hanampy ireo foko­nolona. Mbola mitohy ny fanarahan-dia an’ ireo olon-dratsy amin’ izao fotoana izao. H.R
Antanifotsy – Olona iray ahiana ho mpa­nakan-dalana voasambotra Nivadika ny rasa! Ireo olona saika hanakana taksiborosy avy any Toliara ho aty an-drenivohitra teo Antanifotsy indray no nitsoaka rehefa nivoaka tao anaty fiara ireo mpandeha omaly vao maraimbe tokony ho tamin’ny 4 ora. « Nitondra fiara tsy mataho-dalana marika Nissan Hardbody ireo jiolahy tamin’izany. Nentin’ireo namany nitsoaka ilay fiara raha vao nivoaka ireo tao anaty fiara mpitatitra, ka ny mpamily indray no tavela teo ary noraisim-potsiny », hoy ny tatitra voaray avy eo anivon’ny zandary any an-toerana. « Noraisina avy hatrany ny fepetra ka niantso ny teo anivon’ny « centre immatriculateur » taty Antananarivo ireo mpitandro ny filaminana tany an-toerana mba hahafantarana ny tompon’io fiara io », hoy ihany ny tatitra. Ny zandary sy ny polisy avy ao amin’ny borigadin’Antanifotsy no mandray an-tanana ity raharaha ity. H.R
Korontana any Mananara – Olona dimy voasambotra, nahantona ny kaomisarian’ny polisy Milamindamin-dratsy ny faritr’i Mananara Avaratra, omaly taorian’ilay fitokonana nahafaty olona tany an-toerana ny sabotsy hariva teo. Olona dimy no voasambotry ny polisy omaly raha nanakorontana tao amin’ny seranam-piaramanidina. Nisy fiaramanidina tonga tany an-toerana nitondra ireo mpiasan’ny Jirama voatondro hanamboatra ireo fitaovana nisy nandoro. « Raha vao saika hipetraka teo amin’ny seranana anefa ilay fiaramanidina dia nisy andian’olona nanakana tamin’ny alalan’ny fandoroana kodiarana ka voatery nitodi-doha niverina. Niroso tamin’ny fisamborana ny polisy ka olona dimy no tra-tehaka tamin’izany », hoy ny tale jeneralin’ny polisim-pirenena, ny Contrôleur général de police Rakotondratsima Désiré Johnson. . Etsy andanin’izay dia nahantona aloha ny asan’ny kaomisarian’ny polisy any an-toerana. « Mbola ho hita eo na hosoloina na tsia ireo polisy miasa ao amin’io kaomisaria io », hoy ihany ny tale jeneralin’ny polisy. Efa tonga any an-toerana aloha ireo polisy avy ao Fenoarivo atsinanana, Toa­masina ary Maroantsetra. Miisa eo amin’ny 25 eo izy ireo, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Nandray fepetra manokana tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina ihany koa ny lehiben’ny distrika any an-toerana omaly ary nihatra omaly hariva ihany izany. H.R
Bakalorea, Fanadinana, Mpanoratra Rijakely, 28.08.2012, 09:53	FIARAHAMONINA
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	Leonidas Tezapsidis – «Tsy mbola tapaka ny famatsiam-bolan’ny Vondrona Eoropeana»
Amnesty International – Voakiana mafy indray ny mpitandro ny filaminana
Fandaminana – Nangataka hanemorana ny fifidianana ny Foloalindahy, ny Ffm ary ny Csc Fanehoan-kevitra faranyLitakely dans Polisy nahafaty olona – Voalaza fa tao anaty haizina no nisian’ilay fifanjevoanaTambanivohitra2 dans Valy bontana – Hotorian’ny ankolafy Ravalomanana ny jly Ravalomanana sy ny kolonely Lylisonrado dans Fitrandrahana ao Didy – Teratany srilankey iray nentina aty Antananarivo niaraka tamin’ny vatoHAGA Eric dans Fanombohan’ny fanafihana – Dahalo 11 lavon’ny tafika manokana any Atsimoandr dans Ambatovy – Afaka 5 volana vao mety tena hitrandraka Nickel sy CobaltSokajy	BAO TSY MIVILY